GAZİBİS Stations dugwọ Mbido na usoro otu | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
HomeTurkeyAla nke Anatolia Region27 GaziantepGAZİBİS Stations dugwọ usoro andgwọ na ndị otu
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Ala nke Anatolia Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey 0
tariffs na ndi otu ahia
Obodo Gaziantep, iji mee ka a na-eji ịnyịnya ígwè eme ihe dị ka ebugharị njem yana ebumnuche ntụrụndụ na egwuregwu; GAZİBİS bu n’obi ịgbasa Sisikkisi Bisikilet Smart Bicycle nke Usoro Gaziantep na Gaziantep niile, ma si otú a na-enye njem dị mma na gburugburu ebe obibi maka ndị hụrụ igwe ịgba agba.
Site na sistemụ igwe kwụ otu ebe Smart Bike, ndị hụrụ igwe kwụ otu ebe agaghị eburu anyịnya igwe, ha ga-enwe ike ịgbazite igwe kwụ ọtọ site na ebe ọ bụla GAZİBİS ma hapụ ha gaa na ọdụ GAZİBİS ọ bụla.
Kedu otu ị ga - esi bụrụ onye otu nke sistemụ GAZİBİS?
Kalealti, Egwuregwu, 15 July, Manoglu Park (SankoPark), Masal Park, Wonderland na Gaün 7 ọdụ etinyere na sistemụ igwe kwụ otu ebe 108, enwere ike isi na kaadị azụmahịa Gaziantep niile Gaziantep dị na Balikli (dị n'azụ ụlọ alakụba nke Omeriye) Gaziantep Card Personalization A na-eji ya na kaadị ewedatara na kaadị kredit. Enweghi ike ịnabata ya na kaadị efu. A na-akwụ ụgwọ elekere elekere dị ka 1 TL.
Ọ bụrụ n’ịbubu onye otu sistemụ Gazibis, inwere ike ibufere ndị otu gị na kaadị Gaziantep. Ihe niile ị ga - eme bụ ịdebanye aha maka usoro Gazibis gị na kaadị Gaziantep gị site na mpempe akwụkwọ ịntanetị ị nwere ike dejupụta na nkeji 5.
Ndi otu GAZİBİS
N'oge ndị otu ahụ, a na-enweta ozi nkeonwe ma bịanye aka na nkwekọrịta ahụ. Enwere ike ịchọta ozi gbasara nkọwa ndị a na sọftụwia kiosk yana n'ọdụ ụgbọ elu nwere aha njirimara.
A na-emepụta ikike mepere emepe nke 25 TL site na kaadị kredit maka ịzụta ya na Kaadị Akwụghachi, na mgbe nlọghachi nke igwe kwụsịrị, mgbe egochara iji ego ahụ, a na-akagbu onyinye nke fọdụrụ na usoro nke ụlọ akụ kpebiri. Kaadị akwụmụgwọ ga-emegherịrị maka ịzụta azụrụ.
Ejiri igwe foto 7 n'ịntanetị na-enyocha ebe a na-ahụ igwe kwụ otu ebe. Njikwa na mmezi nke ịnyịnya ígwè 15 bụ nke Gaziulaş na-ebu.
A ga-ahapụrịrị bọmbụ e si n’ọdụ ọ bụla gaa n’ebe ndị ọzọ. Enwere ike ịgbazite bọọlụ 3 site na kaadị kredit mana naanị 1 nwere ike ịgbazite kaadị Gaziantep. Oge nloghachi azụtara igwe kwụsịrị igwe ejiri naanị awa 24. N'ihe banyere oge 24, a ga-amalite usoro ikpe ndị omekome ahụ ebe ọ bụ na a na-atụle nkwụsi ike ahụ, nke a gụnyere na nkwekọrịta ahụ.
IHE: Ọrụ otu na ụdị ịntanetị bụ naanị maka ndị edebanyere aha na Gaziantep. Ndị debanyere aha ha n'obodo ndị ọzọ kwesịrị ịbịarute Gaziantep Card Central Branch ma mee ka ndị otu ha na Cardị Gaziantep. Ndebanye aha sitere na nhazi nhazi kaadị Gaziantep bụ n'efu, o zuru ezu inwe kaadị njirimara gị na Kaadị Gaziantep. Ọ bụrụ na ịnweghị kaadị Gaziantep ma, ọ ga-ekwe omume ịnweta ya site na Ebe Azụmaahịa Gaziantep maka ego.
Onye otu GAZIBIS ya na Kaadioantep Card
Ugbu a Gazibis dị na Kaadị Gaziantep. You nwere ike iji Kaadị Gaziantep gị (belụsọ ụdị / kaadị akwụghị ụgwọ) ị na-eji ụgbọ ala, tram na ụzọ mbata ndị ọzọ maka ịgbazite igwe kwụ otu ebe na Gazibis.
Ọ bụrụ n’ịbubu onye otu sistemụ Gazibis, inwere ike ibufere ndị otu gị na kaadị Gaziantep. Ihe niile ị ga - eme bụ ịdebanye aha maka usoro Gazibis gị na kaadị Gaziantep gị site na mpempe akwụkwọ ịntanetị ị nwere ike dejupụta na nkeji 5. Can nwere ike ịmalite site na nhọrọ ndị a.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ekwentị 0342 329 45 45 na 0533 784 27 27 ị nwere ike nweta nkwado ozugbo site na ahịrị whatsapp.
IHE: Ọrụ ndị otu site na mpempe akwụkwọ ntanetị bụ naanị maka ndị nwere aha obibi na Gaziantep. A choro ndi bi n’obodo ndi ozo ka ha biarue Gaziantep Card Central Branch ma mee ka ndi otu ha tinye aka na kaadi Gaziantep. Ndebanye aha sitere na nhazi nhazi kaadị Gaziantep bụ n'efu, o zuru ezu inwe kaadị njirimara gị na Kaadị Gaziantep. Ọ bụrụ na ịnweghị kaadị Gaziantep ma, ọ ga-ekwe omume ịnweta ya site na Ebe Azụmaahịa Gaziantep maka ego.
GAZİBİS Etu esi agbazite?
Etu esi azụta igwe eji agba akuko na kaadi akuko Gaziantep site na ebe GAZİBİS?
1. ntụpụ ụkwụ:Ọdịdị perationdị Arụ Ọrụ: Pịa Zụrụ Alụlụ "bọtịnụ.
2. ntụpụ ụkwụ : Ngosiputa Gaziantep ma ọ bụ Kaadị n'uju AKADKỌ AK CKỌ AK .KỌ mpaghara. Usoro a na-ewe ihe dika 5 sekọnd.
Nzọụkwụ 3:Pinye paswọọdụ Gaziantep gị. (E zigara paswọọdụ ekwentị a na ekwentị gị n'oge ndebanye aha n'ịntanetị.)
Nzọụkwụ 4:Ọ bụrụ na egbochighị kaadị gị ma nweekwa nguzozi zuru oke (opekata mpe 5 tl) ga-ekenye gị igwe kwụ otu ebe. Nwere ike ịhụ nọmba igwe kwụ otu ebe na ihuenyo. Usoro ahụ na-ahọrọ igwe kwụ otu ebe.
Nzọụkwụ 5:You nwere ike bulie igwe kwụ otu ebe na ọnụọgụ ngosi gosipụtara site na ibelite ya na mkpọchi mkpọchi n'ime 20 sekọnd. Ọkụ na-acha uhie uhie nke ọkụ na mkpọchi kwesịrị ịgbanye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na anabataghị 20 na sekọnd, a ga-akpọchi sistem. N'okwu a, megharịa usoro ahụ. Enweghị ụgwọ ọ bụla.
Nzọụkwụ 6:Nyochaa nkwụsi ike nke igwe kwụ otu ebe n'ime sekọnd 60 mgbe iwere ya. Ọ bụrụ na enweghị nsogbu ị nwere ike ibido were ya. Biko weghachi ya ma ọ bụrụ na ọ dị njọ. 60 anaghị akwụ ụgwọ site na igwe kwụghachi azụ na sekọnd. (Biko lelee igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ibu ụzọ zụta.)
Mara: I nwekwara ike iji bọtịnụ 'Zụọ ihe site na ịhọrọ bọtịnụ.'
MGBE A NA-EKWU; Na ngwụcha nke arụmọrụ ahụ, ka egosiri ihe ịga nke ọma nke ozi na ihuenyo ahụ, gaa igwe kwụ otu ebe ị kọwapụtara ma were igwe kwụ otu ebe si oghere ahụ. Naanị 1 (otu) igwe kwụ otu ebe ka enwere ike iji kaadị ndị otu zụta.
Etu aga - esi zụta igwe na kaadị kredit si GAZİBİS Station?
M 1.A:Nhọrọ Sedị Nrụ Ọrụ: Na-agbanye bọtịnụ "Zụrụ Kaadị."
2. Nzọụkwụ:Tinye nọmba ekwentị gị na ihuenyo ahụ wee pịa bọtịnụ nkwenye ahụ.
3. Nzọụkwụ:Tinye ozi ntinye kaadị akwụmụgwọ na ọnụọgụ igwe ịchọrọ ịgbazinye na enyo, wee pịa bọtịnụ gosi.
4. Nzọụkwụ:Tinye koodu nyocha zigara ekwentị gị site na SMS wee pịa bọtịnụ egosi.
5. Nzọụkwụ:Tinye nọmba igwe ịchọrọ ịgbazinye ma pịa bọtịnụ gosi.
6. Nzọụkwụ:Mgbe ozi azụmaahịa na-aga nke ọma gosipụtara na ihuenyo ahụ, gaa na igwe kwụ otu ebe ị kọwapụtara wee wepu igwe kwụ otu ebe na oghere n'ime sekọnd 20. Ọkụ na-acha uhie uhie nke ọkụ na mkpọchi kwesịrị ịgbanye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụrụ na anabataghị 20 na sekọnd, a ga-akpọchi sistem. N'okwu a, megharịa usoro ahụ. Enweghị ụgwọ ọ bụla.
Etu ị ga-esi weghachi igwe kwụ otu ebe na GAZİBİS
Nzọụkwụ 1:Debe igwe kwụ otu ebe ị na-eji. Ọnọdụ ọdụ ma ọ bụ mkpọchi mkpọchi nwere ike ịdị iche.
Nzọụkwụ 2:Mgbe ịtinyechara, chere ihe dị ka sekọnd 5 wee hụ na ikanam LED n’ebe mkpọchi ahụ acha uhie uhie.
Nzọụkwụ 3:Gbaa mbọ hụ na igwe kwụchie igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na igwe anaghị akpọchi, nwalee ebe ọzọ mkpọchi.
Nzọụkwụ 4:Mgbe i kpochichara igwe, biko pịa bọtịnụ “BICYCLE DROP” iji tụfuo igwe gị na kaadị Gaziantep.
(Ọ bụrụ na iji kaadị akwụmụgwọ zụrụ azụ, ị ga-enweta ozi ederede na ekwentị gị ọbụlagodi na ahapụla igwe kwụ otu ebe. Needchọghị iji bọtịnụ IR BICYCLE DROP ”).
Nzọụkwụ 5:Gụọ onye gụrụ Gaziantep Kaadị gị. Nke a nwere ike rue ihe dika 3 sekọnd, adọkpụla kaadị gị ma pụọ ​​na ọdụ ahụ tupu emechaa. Achọghị azụmahịa a ma ọ bụrụ na ewere ya na kaadị akwụmụgwọ nara ya.)
Mara: Enweghi ike ịzụta igwe kwụ ọtọ ma ọ gwụla ma usoro ịmegharị igwe kwụsịrị !!! Mgbe nlaghachite ọbụlagodi na-agụghị kaadị ahụ, sistemụ na-ekpebi ego ahụ dabere n'oge eweghachiri igwe kwụ otu ebe ahụ na mkpọchi. Onweghi oge ozo agbakwunyere.
Ọ bụrụ na nsogbu dị na igwe kwụ otu ebe gị
Nzọụkwụ 1:Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe na-egosi nsogbu ọ bụla, hapụ igwe kwụ otu ebe laghachi ebe ọ bụla na ọdụ n'ime ọdụ n'ime otu nkeji (1). Enweghị ụgwọ.
Nzọụkwụ 3:Gbaa mbọ hụ na igwe kwụchie igwe kwụ otu ebe.
Nzọụkwụ 4:Buyzụta igwe kwụ otu ebe ọzọ, pịa kaadị gị ọzọ ma bulie igwe kwụ otu ebe ọzọ na ọnụọgụ ihuenyo ahụ.
Nzọụkwụ 5:Mgbe ịlechara igwe kwụ otu ebe, ị nwere ike ịhapụ ọdụ ọdụ.
Biko, lelee igwe kwụ otu ebe ịchọrọ ibu ụzọ zụta !!!
Nyefee na free na GAZIBIS
Oge mbụ ị ga-anọdụ maka bọs na trams nke gọọmentị Gaziulaş na-akwụghị ụgwọ n'ime elekere mbụ mgbe ịgbazite kaadị gị jiri kaadị Gaziantep gị. Nke a pụtara na mgbe iji ịnyịnya ígwè mee otu akụkụ nke njem gị, akụkụ nke ndị njem ọhaneze, ị ga-akwụ ụgwọ igwe kwụ ọtọ.
Sankopark Gazibis Ọdụ
Ọdụ egwuregwu Gazibis
Mahadum Gazibis University
Democratic Gazibis Station
Map nke Gazibis
Ka ịbanye na maapụ Gazibis ebe a Pịa ebe a!